China L-Lysine HCL 98.5% CAS 657-27-2 Yekupa Giredhi vagadziri uye vanotengesa | Honray
L-Lysine HCL 98.5% CAS 657-27-2 Yekupa Giredhi
Lysine (Yakapfupiswa Lys) ndechimwe chezvakakosha nziyo dzeprotein. Muviri unoda Lysine inova imwe yemasere anokosha amino acids. Asi Lysine haigone kugadzirwa nemuviri. Inofanira kupihwa mukudya. Naizvozvo inonzi "yekutanga yakakosha amino asidhi". Sechakanaka chinogonesa mumiririri, Lysine anogona kukwidza mwero wekushandisa mapuroteni kuitira kuti igone kuwedzera chikafu chekudya zvakanyanya. Izvo zvakare zvinoshanda mukuvandudza kukura, kugadzirisa chishuwo, kuderedza chirwere uye kusimbisa muviri. Inogona kudzora moyo uye nekuchengetedza yakatsva muzvikafu zvematin.
1) Inoshandiswa mukugadzirira kwekomboni amino acid kuwedzerwa uye ichiita mhedzisiro iri nani kupfuura iyo hydrolytic protein kuwedzerwa uye mashoma mhedzisiro-mhedzisiro.
2) Inogona kugadzirwa zvinovaka muviri nemavitamini akasiyana siyana uye maglucose, anonwiswa nemudumbu mudumbu mushure memuromo.
3) Kuvandudza maitiro emamwe madhiragi uye nekuvandudza kushanda kwawo.
Lysine rudzi rwevanhu hwakakosha amino acid. Inogona kuwedzera hematopoietic basa, gastric secretion, kugadzirisa mashandisirwo eprotein, kuwedzera kusagadzikana kwezvirwere, chengetedza metabolic bhalansi uye kuve mukufarira kwevana muviri nehungwaru kukura.
1) Kuvandudza mhando ye nyama uye kuwedzera yakaonda nyama muzana
2) Kuvandudza mashandisiro ekushandisa kweprotein yekudyisa uye kudzikisa kushandiswa kweprotein isina kuchena
3) Lysine chikafu chekusimbisa chikafu chine basa rekuvandudza chishuwo chemhuka neshiri, kusagadzikana kwezvirwere, kupora kwemaronda, mhando yenyama uye kuwedzera gastric secretion. Icho chinhu chakakosha pakusanganisa cranial nerve, germ cell, protein uye hemoglobin.
4) Dzivisa piglet scours, kudzikisa mutengo wekudya uye nekuvandudza kudzoka kwehupfumi
Lysine inowanikwa yekumomesa yakaoma amino acid perfusion uye kuita kuti chiitiko chive nani pane iyo hydrolytic protein perfusion uye mashoma mhedzisiro mhedzisiro. Inogona kugadzirwa inovaka muviri inosimudzira mumiriri nemavitamini akasiyana siyana uye glucoses, uye inonwiswa zviri nyore negastro ura mushure memuromo. Lysine inogona zvakare kuvandudza mashandiro emamwe madhiragi uye kugona kwawo.
Munhu akaidza (yakaoma hwaro) ≥98.5%
Chaicho kutenderera + 18.0 ° ～ + 21.5 °
Kurasikirwa pakuoma .01.0%
Residue pamusoro kuvesa ≤0.3%
Ammonium munyu (NH4+ hwaro) ≤0.04%
Arsenic (seAs) .01.0 mg / kg
Heavy simbi (sePb) ≤10 mg / kg
PH Kukosha 5.0 ～ 6.0
Pashure: Mutengo unoderedzwa Cas No. 61-90-5 - DL-Methionine CAS 59-51-8 yeParamma Giredhi (USP / EP) - Honray
Zvadaro: L-Threonine 98.5% CAS 72-19-5 Yekupa Giredhi
L-Tryptophan CAS 73-22-3 Yekupa Giredhi
L-Threonine 98.5% CAS 72-19-5 Yekupa Giredhi
L-Valine 72-18-4, Pharm Giredhi L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Kudya Kwemhuka, L-Threonine Pharm Giredhi, L-Threonine Chikafu cheGiredhi,